Biodiversity Vision - IG
Ọhụụ ndụ anyị dị iche iche doro anya:
⚫ hu na ndu di iche
nwere ihe ...
O zughị ezu iwere ihe ụfọdụ dị mma dịka ịtapụta obere akụkụ nke osimiri ma ọ bụ ịkọwapụta ala nwere obere ihe ndị ọzọ. Anyị kwesịrị ikenye / ịzụta ala iji mepụta ụzọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ site na ala dị elu ruo ala dị elu, site na ndịda gaa n'ebe ugwu - dịka. ikwado Mbugharị nke umu ihe ndi ozo n’iru agha agha megide mgbanwe ihu igwe - wdg.
⚫ dabere na sayensị
ọbụghị ndọrọndọrọ ọchịchị…
O kwesịrị ịbụ akụkọ mmeri. More ala ekenyela okike maka abamuru nke umu anumanu tinyere mmadu.
Ingsachapụ ego dabere na imere ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ maka ego ejirila ego ma ọ bụ nke na-enweghị isi ekwesịghị ime.
O doola anya na ihe ka ọtụtụ n’ime ndị sayensị kwuru na anyị anaghị emecha nke ọma ịchekwa ihe dị iche iche. Agbanyeghị, ha niile nwere ike ha niile ekwenyeghị na atụmatụ nke usoro. Ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya itinye akụ na ọrụ dị iche iche. Otu ọrụ dị otú ahụ bụ iji obere ọdọ mmiri nwee agwaetiti iji nye nnụnụ ndị ahụ ka ha laghachi ma mụọ.
Ọ bụghị ajụjụ nke ịbụ onye a hụrụ ka ime ihe kama ịchekwa osisi na anụmanụ ndị ahụ n'ezie.
⚫ na ntinye
2% nke GDP…
Nationsfọdụ obodo nwere ya dịka mgbaru ọsọ ha itinye ego na 2% nke ihe Ego Nweta Mba (Gross Domestic Product) maka nchekwa. Gbachitere ụdị ihe dị iche iche nke mbara ụwa adịghị mkpa. Anyị na-ekwu na 2% nke GDP maka mmelite na nchedo ihe dị iche iche.
Anyị enweghị ike ichere, yabụ atụmatụ ahụ kwesịrị ịdị ozugbo, kama iji nwayọ na-abawanye mmefu ahụ karịa x afọ nke afọ.
Iji tụọ ihe mgbaru ọsọ a 2%, ọ kwesịrị ịbụ ọrụ achọrọ na esiteghị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, dị ka m kwuru n'elu.
Biko pịa na obere akụ ˅ ˄ dị n’elu aka nri igosi ma ọ bụ zoo ederede ọzọ ⬆️
Kekọrịta onye ọ bụla njikọ anyị www.biodiversity.vision